နာမညျကွီးဇာတျကားမြားထဲမှ ကွညျ့ရှုသူအမြားစု သတိမထားမိခဲ့တဲ့ အလှဲအခြျောမြား။ – SoShwe
Home/Entertainment/နာမညျကွီးဇာတျကားမြားထဲမှ ကွညျ့ရှုသူအမြားစု သတိမထားမိခဲ့တဲ့ အလှဲအခြျောမြား။
နာမညျကွီးဇာတျကားမြားထဲမှ ကွညျ့ရှုသူအမြားစု သတိမထားမိခဲ့တဲ့ အလှဲအခြျောမြား။
၁။ “Bratz”ဇာတျကားထဲမှ အသားအညိုရောငျသရုပျဆောငျနရောမှာ အစားထိုးသရုပျဆောငျရဲ့ အသားအရကေ အဖွူရောငျဖွဈနသေောအခါ။
This is what I get for watching the bratz movie #comedy #fyp #foryoupage #funny #bratz #foryou
♬ High Pitch Voice Hehehe – Wayne Fletcher
၂။ “To All the Boys” ဇာတျကားထဲမှာ Peter က ဆှဲကွိုးလကျဆောငျမပေးခငျအထိ ဆှဲကွိုးဝတျဆငျထားခဲ့ပွီး Peter က ဆှဲကွိုးဝတျပေးတဲ့အခါမှ Lara Jean ရဲ့ လညျပငျးမှ ထူးဆနျးစှာ ပြောကျဆုံးသှားသော အသညျးပုံဆှဲကွိုးလေး။
this is what my brother had to show me today … LOVE THIS MOVIE THO❤️ #fyp #TheReplay #toalltheboysivelovedbefore #funny #moviemistakes
♬ original sound – leahalba
၃။ “Teenage Mutant Ninja Turtles : Out of the Shadows” ဇာတျကားရဲ့ ပထမဦးဆုံးအပိုငျးမှာ လူအုပျကွားထဲ အကငြ်္ီလဲသှားတဲ့ Megan Fox ဝတျထားတဲ့ ဘောငျးဘီအရှညျကို Megan ဘယျနရောမှာ သှားခြှတျလိုကျပါလိမျ့?
Like they just vanished- black leggings and skirt. We don’t know her #moviemistakes #tmnt #fyp #meganfox #stephenamell
♬ original sound – MadiRenee
၄။ “Back to the Future” ရုပျရှငျထဲက Emmett Brown ရဲ့ နာမညျကို ဖုနျးနံပါတျမှတျထားတဲ့စာအုပျထဲမှာ “T” တဈလုံးထဲဖွငျ့သာ ပေါငျးထားသောအခါ။
၅။ “A Christmas Prince” ဇာတျကားကို နယူးယောကျချမွို့မှာ ရိုကျကူးတယျလို့ဆိုထားပါပမေယျ့ ဇာတျလမျးအစမှာ ခြီကာဂိုရဲ့ မွို့တျောအလှကို မွငျလိုကျရသောအခါ။
They thought we wouldn’t notice lol #christmasprince #netflix #moviemistakes #funny #christmas #chicago #newyork #chicagocheck #fyp #foryou #foryoupag
♬ original sound – brinakaymusic
၆။ “Sonic the Hedgehog” ရုပျရှငျထဲမှာ Sonic လေးရဲ့ နားရှကျပုံပွောငျးနမှေုကွီး။
၇။ “Outer Banks” ဇာတျကားမှာ John B ဟာ ရှပျအကငြ်္ီကွယျသီးတဈစုံကိုပဲတပျထားပွီး ပွေးလှားနရေငျးနဲ့ လူယုတျမာတှလေို့ လူယုတျမာတှရေဲ့ လကျကနထှေကျပွေးလှတျမွောကျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ John တဈယောကျ ရှပျအကငြ်္ီကွယျသီးအားလုံးနီးပါးကို တပျထားတာကို တဈယောကျယောကျရှငျးပွဖို့ လိုနပေါပွီ။
Justalittle movie mistake 🙂 #moviemistake #obx #johnb #button #fyp #foryou #foryoupge
♬ original sound – Fan of obx! ❤️
၈။ “To All the Boys I’ve Loved Before” မှာ Lara Jean နဲ့ Peter တို့ရဲ့ သဘောတူစာခြုပျပျေါက နောကျဆုံးပွုလုပျလိုသော ဆန်ဒကိုရေးသားထားတဲ့ လကျရေးလေးဟာ ပွောငျးလဲလို့နပေါတယျ။
၉။ Moana နဲ့ မတှခေ့ငျထဲက “Te Ka” အကွောငျး ထိုးထားတဲ့တကျတူးက Maui ရဲ့ကိုယျပျေါမှာ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
၁၀။ “The Ring” ဇာတျကားထဲမှာ အငျတာနကျကိုအသုံးပွုကာ ဝဘျဆိုဒျတဈခုကို ဝငျရောကျတယျလို့ပွောထားပွီး “HTML file”ကို မွငျလိုကျရတဲ့ နညျးပညာကြှမျးကငျြပညာရှငျ ပရိသတျကွီးမြားအတှကျ နှဈမိနဈလောကျငွိမျသကျပေးပါ။
၁၁။ “Avengers : Age of Ultron”မှာ Black Widow ရဲ့ အသှငျအပွငျဟာ ဘာကွောငျ့မြား လုံးဝကွီးပွောငျးလဲသှားရတာလဲနျော။
Movie Mistakes ep.1: Avengers Age of Ultron #avengers #marvel #fyp #xyzbca #hulk #foryoupage #blackwidow #Avengers2 #ultron
♬ original sound – Alex Garcia
၁၂။ “Walking Dead” ဇာတျကားထဲက ဇာတျဝငျခနျးတဈခုက သဈပငျတဈပငျရဲ့ပငျစညျကွီး ထူးဆနျးစှာ ပြောကျဆုံးသှားမှု။
Since when did trees move? #thewalkingdead #moviemistakes
♬ original sound – LootBerry
၁၃။ “Avengers : Endgame” ထဲမှာ ကွိုးပဲ့သှားတဲ့ Captain America ရဲ့ ဒိုငျးကွီးကို စဈမွပွေငျပျေါမှာ ဘယျသူကမြား ပွနျပွီး ပွုပွငျပေးလိုကျသလဲဆိုတာကို အခုထိအဖွရှောမရနိုငျခဲ့ပါဘူး။
Did you catch this? #avengersendgame #avengers #captainamerica #moviemistakes #fyp
♬ original sound – Andrew DeVitre
၁၄။ “The Titanic” ဇာတျကားထဲက သင်ျဘောထဲကိုတိုးဝငျလာတဲ့ ရပေမာဏဟာ ပွတငျးပေါကျကို ကြျောလှားသှားပွီး အခြိနျခဏတာအတှငျးမှာပဲ ရစေီးဆငျးမှုနဲ့ ရမေကျြနှာပွငျပွောငျးလဲသှားမှုဟာ ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့ဆှဲအားကွောငျ့မြားလား?
၁၅။ “Rick and Morty” ဇာတျကားထဲမှာ Rick က တံခါးပိတျလိုကျပမေယျ့ တံခါးပတ်တာက ဘာကွောငျ့မြား အပွငျမှာရှိနရေတာလဲ?
၁၆။ “Once UponaTime in Hollywood” ဇာတျကားထဲမှာ Brad Pitt ရဲ့ ခှေးလေး Brandy ဟာ အမဖွဈရမှာကို ဘာကွောငျ့မြား အထီးအင်ျဂါ ပါနတောလဲ မသိဘူးနျော . . .
၁၇။ “Bone Tomahawk” ဇာတျကားထဲက ဇာတျကောငျ David Arquette ရဲ့သှားတှဟော ဇာတျဝငျခနျးတဈခုမှာ ညဈပနေပွေီး နောကျထပျဇာတျဝငျခနျးတဈခုမှာတော့ ဖွူနပေါတယျ။ (Coolgate နဲ့ သှားတိုကျလို့ဖွဈမယျနျော။)
၁၈။ “High School Musical” ဇာတျကားထဲက ဇာတျဝငျခနျးတဈခုမှာ ကငျမရာသမားကိုမွငျနရေသောအခါ။
နာမည်ကြီးဇာတ်ကားများထဲမှ ကြည့်ရှုသူအများစု သတိမထားမိခဲ့တဲ့ အလွဲများ။
HSM movie mistake 😳😂 #highschoolmusicial #wereallinthistogether #moviefail #fyp #foryoupage
နာမည်ကြီးဇာတ်ကားများထဲမှ ကြည့်ရှုသူအများစု သတိမထားမိခဲ့တဲ့ အလွဲအချော်များ။
၁။ “Bratz”ဇာတ်ကားထဲမှ အသားအညိုရောင်သရုပ်ဆောင်နေရာမှာ အစားထိုးသရုပ်ဆောင်ရဲ့ အသားအရေက အဖြူရောင်ဖြစ်နေသောအခါ။
၂။ “To All the Boys” ဇာတ်ကားထဲမှာ Peter က ဆွဲကြိုးလက်ဆောင်မပေးခင်အထိ ဆွဲကြိုးဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပြီး Peter က ဆွဲကြိုးဝတ်ပေးတဲ့အခါမှ Lara Jean ရဲ့ လည်ပင်းမှ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားသော အသည်းပုံဆွဲကြိုးလေး။
၃။ “Teenage Mutant Ninja Turtles : Out of the Shadows” ဇာတ်ကားရဲ့ ပထမဦးဆုံးအပိုင်းမှာ လူအုပ်ကြားထဲ အင်္ကျီလဲသွားတဲ့ Megan Fox ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီအရှည်ကို Megan ဘယ်နေရာမှာ သွားချွတ်လိုက်ပါလိမ့်?
၄။ “Back to the Future” ရုပ်ရှင်ထဲက Emmett Brown ရဲ့ နာမည်ကို ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ “T” တစ်လုံးထဲဖြင့်သာ ပေါင်းထားသောအခါ။
၅။ “A Christmas Prince” ဇာတ်ကားကို နယူးယောက်ခ်မြို့မှာ ရိုက်ကူးတယ်လို့ဆိုထားပါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအစမှာ ချီကာဂိုရဲ့ မြို့တော်အလှကို မြင်လိုက်ရသောအခါ။
၆။ “Sonic the Hedgehog” ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Sonic လေးရဲ့ နားရွက်ပုံပြောင်းနေမှုကြီး။
၇။ “Outer Banks” ဇာတ်ကားမှာ John B ဟာ ရှပ်အင်္ကျီကြယ်သီးတစ်စုံကိုပဲတပ်ထားပြီး ပြေးလွှားနေရင်းနဲ့ လူယုတ်မာတွေ့လို့ လူယုတ်မာတွေရဲ့ လက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ John တစ်ယောက် ရှပ်အင်္ကျီကြယ်သီးအားလုံးနီးပါးကို တပ်ထားတာကို တစ်ယောက်ယောက်ရှင်းပြဖို့ လိုနေပါပြီ။
၈။ “To All the Boys I’ve Loved Before” မှာ Lara Jean နဲ့ Peter တို့ရဲ့ သဘောတူစာချုပ်ပေါ်က နောက်ဆုံးပြုလုပ်လိုသော ဆန္ဒကိုရေးသားထားတဲ့ လက်ရေးလေးဟာ ပြောင်းလဲလို့နေပါတယ်။
၉။ Moana နဲ့ မတွေ့ခင်ထဲက “Te Ka” အကြောင်း ထိုးထားတဲ့တက်တူးက Maui ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
၁၀။ “The Ring” ဇာတ်ကားထဲမှာ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကာ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဝင်ရောက်တယ်လို့ပြောထားပြီး “HTML file”ကို မြင်လိုက်ရတဲ့ နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ပရိသတ်ကြီးများအတွက် နှစ်မိနစ်လောက်ငြိမ်သက်ပေးပါ။
၁၁။ “Avengers : Age of Ultron”မှာ Black Widow ရဲ့ အသွင်အပြင်ဟာ ဘာကြောင့်များ လုံးဝကြီးပြောင်းလဲသွားရတာလဲနော်။
၁၂။ “Walking Dead” ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုက သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ပင်စည်ကြီး ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားမှု။
၁၃။ “Avengers : Endgame” ထဲမှာ ကြိုးပဲ့သွားတဲ့ Captain America ရဲ့ ဒိုင်းကြီးကို စစ်မြေပြင်ပေါ်မှာ ဘယ်သူကများ ပြန်ပြီး ပြုပြင်ပေးလိုက်သလဲဆိုတာကို အခုထိအဖြေရှာမရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၁၄။ “The Titanic” ဇာတ်ကားထဲက သင်္ဘောထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့ ရေပမာဏဟာ ပြတင်းပေါက်ကို ကျော်လွှားသွားပြီး အချိန်ခဏတာအတွင်းမှာပဲ ရေစီးဆင်းမှုနဲ့ ရေမျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲသွားမှုဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကြောင့်များလား?
၁၅။ “Rick and Morty” ဇာတ်ကားထဲမှာ Rick က တံခါးပိတ်လိုက်ပေမယ့် တံခါးပတ္တာက ဘာကြောင့်များ အပြင်မှာရှိနေရတာလဲ?
၁၆။ “Once UponaTime in Hollywood” ဇာတ်ကားထဲမှာ Brad Pitt ရဲ့ ခွေးလေး Brandy ဟာ အမဖြစ်ရမှာကို ဘာကြောင့်များ အထီးအင်္ဂါ ပါနေတာလဲ မသိဘူးနော် . . .
၁၇။ “Bone Tomahawk” ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင် David Arquette ရဲ့သွားတွေဟာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ ညစ်ပေနေပြီး နောက်ထပ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာတော့ ဖြူနေပါတယ်။ (Coolgate နဲ့ သွားတိုက်လို့ဖြစ်မယ်နော်။)
၁၈။ “High School Musical” ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ ကင်မရာသမားကိုမြင်နေရသောအခါ။
Previous Britney Spears နဲ့ Janet Jackson တို့ကို Instagram ကနတေဆငျ့ လူသိရှငျကွားတောငျးပနျခဲ့တဲ့ Justin Timberlake
Next အခြိနျ (၅) နှဈကွာတဲ့အထိ Netflix မှာ ကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံးအဖွဈ စံခြိနျတငျနဆေဲဖွဈတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတဈခု။
Squid Game စီးရီးဟာ Netflix ပျေါမှာ အထူးရပေနျးစားခဲ့ပွီး ကွညျ့ရှုသူတှအေကွိုကျ စိတျလှုပျရှားစရာတှေ၊ တှေးတောစရာတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ။ ကိုရီးယားဒရမျမာဇာတျကားတဈကားဖွဈတဲ့ Squid Game ဟာ အပိုငျး …